KUMAGALATI 3 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
KUMAGALATI 3KUMAGALATI 3
UPawulos nabanye abathunywa
21Emva kweminyaka elishumi elinesine ndabuyela eJerusalem noBharnabha, ndikhatshwa nguTito.Mseb 11:30; 15:2 2Ndaya kuba ndityhilelwe nguThixo ukuba mandiye. Saba nentlanganiso yabucala kunye neenkokheli, ndaza ndazichazela iindaba endizishumayela ezintlangeni. Ndandingafuni ukuba umsebenzi esendiwenzile nalowo ndandisawenza ube lilize. 3Nakuba wayengumGrike, uTito owayenam zange anyanzelwe ukuba aluke, 4nangona amadoda athile azenza amakholwa angenelela, aza afuna ukuba makalùswe. Aba bantu bangena ngokunyebelezela, befuna ukuhlola le nkululeko sinayo kubudlelane bethu noKrestu, befuna ukusenza amakhoboka. 5Kambe asizange sibaqhelisele nakancinane, khon' ukuze sinigcinele inyaniso yeendaba ezimnandi ingenabala.
6Kodwa ke abo baziinkokheli ezaziwayo – nditsho kuba into abayiyo ayenzi mahluko kum, kaloku uThixo yena akasebenzi ngembonakaloHlaz 10:17 – ndithi ke ezo nkokheli zange zifumane sikhwa kum. 7Ndaweni yaloo nto zayamkela into yokuba uThixo undiphathise uxanduva lokushumayela iindaba ezimnandi ezintlangeni, kwanjengokuba noPetros ephathiswe uxanduva lokushumayela iindaba ezimnandi kumaJuda. 8Kaloku amandla kaThixo andenza *ndangumthunywa ezintlangeni, kanye ngale ndlela uPetros wenziwa ngayo wangumthunywa kumaJuda. 9UYakobi noPetros noYohane ababesaziwa njengezona ntsika, bayivuma into yokuba uThixo undibizele kulo msebenzi, ngoko ke basibamba isandla sinoBharnabha. Savumelana ke ukuba sisebenzisane; thina sisebenze phakathi kweentlanga, bona ke phakathi kwamaJuda. 10Into abayiyalezayo kukuba sibakhumbule abo bahlelelekileyo phakathi kwabo, nto leyo ke endandisenza yona kakade.
UPawulos ukhalimela uPetros eAntiyokwe
11Xa wayeseAntiyokwe uPetros ndamgqogqa iindlebe, ndimxelela ngempazamo yakhe eyayidandalazile mpela. 12Wayedla ngokutya kunye namakholwa aziintlanga, ngaphambi kokuba kufike apho iqela lamadoda awayevela kuYakobi. Kodwa kuthe kwakuba kufike la madoda warhoxa uPetros, wazilumla ekutyeni namawethu aziintlanga, ngenxa yokoyika ukugxekwa ngâbo babesithi makwalukwe. 13Namanye amakholwa amaJuda abonakalisa kwaobo bubhetyebhetye bufana nobukaPetros, kangangokuba noBharnabha wawexuleka bobo bubhetyebhetye. 14Ndithe ke ndakukuphawula ukungabi nanyaniso kokuziphatha kwabo ngendlela engangqinelaniyo nenyaniso yeendaba ezimnandi, ndathi kuPetros phambi kwabo bonke: “Nakuba wena ungumJuda, ubusoloko uziphethe njengeentlanga kodwa; ungathini ke ngoku ukujika uzinyanzele iintlanga ukuba ziziphathe njengamaJuda?”
Lukholo olusindisa amaJuda kwakunye neentlanga
15Ewe kambe, singawo amaJuda emveli, asizizo iintlanga ezingaboni, ngabula nina. 16Kodwa siyazi ukuba umntu akenziwa abe lilungisa nguThixo ngenxa yokuba esenza okufunwa *ngumthetho kaMosis; kuphela kungokuzinikela kuYesu Krestu. Ke nathi samvuma uKrestu uYesu ukuze uThixo asenze amalungisa ngenxa yokuzinikela kwethu kuye, ingekuba senza okufunwa ngumthetho. Kaloku akukho bani wenziwa ilungisa nguThixo ngenxa yokubambelela kwakhe emthethweni.Ndum 143:2 17Ukuba ke thina sizamela ukwenziwa amalungisa nguThixo ngokumanywa noKrestu, sisafumaneka sisenza isono, ngaba loo nto ithetha ukuthi uKrestu uhambisana nesono? Nakanye! 18Ukuba ndiyaphinda ndiyivuse imikhwa endahlukanáyo nayo ndiyazicacisa ukuba ndim isaphulamthetho. 19Kaloku ndafa kuwo umthetho – ndibulawa kwangawo amabango omthetho – ukuze ndiphilele uThixo. Ndibethelelwe emnqamlezweni kunye noKrestu, 20ngoko ke ayisendim ophilayo, nguKrestu ophilayo kum. Ubomi ke endibudlayo ngoku ndimanywe noNyana kaThixo, ndibudla ngokholo kulowo wandithandayo, wabuncama obakhe ubomi ngenxa yam. 21Andifekethi ngesisa sikaThixo; kuba, ukuba umntu ebenokuba lilungisa phambi koThixo ngenxa yokugcina umthetho, loo nto ibiya kuthetha ukuba wafumana wafa uKrestu.
Umthetho okanye ukholo?
31MaGalatindini, nitheni, aninangqondo? Nibulewe phi ninje nje nje? Nina aba kanye nanisenzelwa inkcazelo ecacileyo ngokufa kukaYesu emnqamlezweni! 2Khanindiphe nje le ndawo: Ngaba uMoya kaThixo namamkela ngenxa yokuba nenze okufunwa ngumthetho, okanye kwakungenxa yokuba naziva nazamkela iindaba ezimnandi? 3Ningathini ukungabi nangqondo kangaka! Njengokuba naqala ngamandla oMoya kaThixo nje, ngaba ngoku senifuna ukugqibezela ngawenu amandla? 4Ngaba izigigaba ezinjengezi naba nazo zafumana zabakho? Ngenene azizange zifane zehle nje! 5Kanene, ngaba uThixo waninika uMoya waza wenza nemiqondiso phakathi kwenu, ngenxa yokuba nina nanithobela umthetho? Okanye ezo zinto wazenza ngenxa yokuba nina nazivayo nazamkela iindaba ezimnandi?
6Kunjengoko *iziBhalo zitshoyo ngoAbraham ukuthi yena wakholwa kuThixo, waza ke uThixo wamenza ilungisa ngenxa yokukholwa kwakhe.ZiQalo 15:6 7Nize niqaphele ke ukuba ngâbo bakholwayo abayinzala ka-Abraham ngenene. 8IziBhalo zona kwangaphambili zakuphawula ukuba uThixo wozenza amalungisa iintlanga ngokukholwa. Zazivakalisa iindaba ezimnandi kuAbraham zisithi: “Ngawe uya kuzithamsanqelisa zonke iintlanga uThixo.”ZiQalo 12:3 9Wakholwa ke uAbraham, waza uThixo wamthamsanqelisa. Ngokunjalo ke bonke abakholwayo banenxaxheba kwintsikelelo ka-Abraham.
10Kanti ke abo bakholose ngokuthobela umthetho baqalekisiwe. Kaloku iziBhalo zithi: “Uqalekisiwe nguThixo lowo ungakuzondeleliyo ukuzithobela zonke iindawo ezisencwadini yomthetho!”Hlaz 27:26 11Kuyaqondakala ke ukuba akukho mntu ugwetyelwa nguThixo ngenxa yomthetho; kuba zithi iziBhalo: “Uya kudla ubomi lowo wenziwe ilungisa nguThixo ngenxa yokukholwa.”Habh 2:4 12Kambe ke wona umthetho awuthethi nto ngokholo. Koko, njengoko neziBhalo zisitsho: “Lowo uzalisekisa zonke iindawo zomthetho wophila ngawo.”Nqulo 18:5
13Kodwa ke uKrestu wasikhulula ekuqalekisweni okuza ngomthetho, ngokuthi yena aqalekiswe endaweni yethu. Kaloku zithi iziBhalo: “Uqalekisiwe nguThixo nabani na obulawa ngokuxhonywa emthini!”Hlaz 21:23 14Yonke le nto yayijonge ekubeni intsikelelo eyathenjiswa uAbraham nguThixo ize igqithiselwe kwiintlanga nguKrestu, khon' ukuze thina simamkele ngokholo uMoya owathenjiswa nguThixo.
Umthetho kunye nesithembiso
15Mawethu, makhe ndininike umzekelo oqhelekileyo. Xa kukho umnqophiso ogqityiweyo akukho bani unokuwujika okanye awongeze. 16Ngoku ke uThixo wênza izithembiso kuAbraham nakumzukulwana wakhe.ZiQalo 12:7 *IziBhalo azitsho kuAbraham ukuthi “kwinzala yakho,” ngokungathi zithetha ngabantu abaninzi, kodwa zithi “kumzukulwana wakho,” zithetha ngomntu omnye qha, onguKrestu. 17Xa nditshoyo ke ndithi umnqophiso ogqitywe nguThixo awunakujikwa ngumthetho ofike emva kwamakhulu amane anamashumi amathathu eminyaka ukho umnqophiso,Mfud 12:40 ungenako nokusitshitshisa isithembiso sikaThixo. 18Kaloku, ukuba ngaba ilifa lixhomekeke emthethweni, loo nto ithetha ukuba alizuzwa ngokwesithembiso, ibe ke kodwa uAbraham walinikwa nguThixo ngesithembiso.
19Yaye iyintoni ke injongo yomthetho? Wona wahlonyelelwa ukuze ucacise isigqitho, lo gama angekafiki umzukulwana ka-Abraham esasenzelwe yena isithembiso. Umthetho wanikelwa zizithunywa, kukho unozakuzaku. 20Kodwa ke unozakuzaku akafuneki nganto xa umntu emnye qha; kambe ke yena uThixo mnye.
21Ngaba ke le nto ithetha ukuba umthetho uchasene nezithembiso zikaThixo? Hayi khona, soze! Kaloku ukuba wawumiselwe umthetho onako ukubadlisa ubomi abantu, ngewawubenze bangamalungisa kuThixo. 22Kodwa ke *iziBhalo ngokwazo zithi ihlabathi liphela lilawulwa sisono. Ngale ndlela ke isithembiso sifumaneka ngokholo kuYesu Krestu, futhi ke sizuzwa ngâbo bakholwayo bodwa.
23Ngokuya lwalungekafiki ukholo sasingamabanjwa omthetho, silindiswe ukutyhileka kokholo. 24Ngoko ke umthetho wawusigcine lo gama angekafiki uKrestu, ukuze sigwetyelwe ngokukholwa kuThixo. 25Xa selifikile ke ixesha lokholo, akusekho mfuneko yakuba sigcinwe ngumthetho.
26Lukholo ke olunenze nangoonyana bakaThixo ngokumanywa noYesu Krestu. 27Nonke nina babhaptiziweyo nimanywe noKrestu; ngoko ke nambethe uKrestu. 28KuKrestu akusekho mJuda nantlanga, akusekho khoboka namntu ukhululekileyo, ndoda nabhinqa. Ninonke ningumntu omnye ngokumanywa noYesu Krestu. 29Ukuba ke ningabakaKrestu ningabazukulwana baka-Abraham. Ngoko ke niziindlalifa ngokwesithembiso.
41Lo mcimbi makhe ndiwubeke ngolu hlobo: Unyana oyindlamafa uphathwa njengesicaka lo gama aselula, nakuba zonke izinto zizezakhe. 2Uyagcinwa alungiselelwe yonke imicimbi yakhe kude kufike ixesha elimiswe nguyise. 3Nathi ke ngokuya besingekakhuli besiphantsi kwezithethe zabantu. 4Kodwa ke lithe lakuzaliseka ixesha, uThixo wamthumela uNyana wakhe. Weza ngokuzalwa ngumntu obhinqileyo, wazalelwa phantsi *komthetho kaMosis, 5ukuze ahlangule abo baphantsi komthetho, size thina sibe ngoonyana bakaThixo.
6Ukubonakalisa ukuba ningoonyana bakhe, uThixo unambese ngoMoya woNyana wakhe. Lowo ke ngulo Moya nidanduluka ngaye nithi: “Tata.”Okanye “Abha, Tata.” 7Ngoko ke anisezizo izicaka, koko ningoonyana. Ukuba ke ngoko ningoonyana bakhe, uThixo uya kunenza iindlamafa.
Ixhala likaPawulos ngamaGalati
8Mandulo, ngokuya naningamazi uThixo, nanibopheleleke kwizinto ezingenguye uThixo. 9Kodwa ngoku nimaziyo uThixo – gxebe, ngoku naziwayo nguThixo – kutheni ukuba niphindele kwezo zithethe zingento, ziphuthileyo? Ngani ukuba niphinde nizikhobokise ngazo? 10Ngoku senihlonipha iintsuku, neenyanga, namaxesha, neminyaka ethile! 11Ndisuka ndibe nexhala, hleze kuthi kanti ndifané ndabulaleka ngani.
12Ndiyanibongoza, mawethu, yibani njengam; kaloku nam ndikwanjengani. Zange nindone nganto. 13Niyazi ukuba ndandingenampilo ukuqala kwam ukushumayela iindaba ezimnandi apha kuni; kaloku ndandigula. 14Kodwa zange nindicekise okanye nindibukule, nangona ndandikwimeko enkenenkene kangako. Koko nandamkela ngendlela enaniya kusamkela ngayo isithunywa sikaThixo; nandamkela ngendlela enaniya kumamkela ngayo uYesu Krestu. 15Naninemincili kangaka nje! Konakele phi ngoku? Nam ngokwam ndiyangqina ndithi: Ukuba kwakunokwenzeka, ngenanikrolonqe nawenu amehlo nawanika mna. 16Ngaba kukuthetha kwam inyaniso oku kundenze ndalutshaba kuni?
17Aba bantu ndithetha ngabo bangathi banikhathalele, kanti ke iinjongo zabo azintle konke. Kuphela into abayifunayo kukunahlukanisa nam, khon' ukuze nibe ngamaphuth' ahlathi-nye nabo. 18Kuyinto entle ukuzixhamla komntu ngeenjongo ezilungileyo – ubunyaniso baloo nto buhlala buhleli nokuba andikho mna phakathi kwenu. 19Bantwana bam endibathandayo, ndiyaphinda ndiva intlungu kwakhona ngenxa yenu, kanye oku komfazi osikwa yinimba. Ndophumla sakwakheka isimilo sikaKrestu kuni. 20Andinqweni ngako ukunga ndingalapho kuni ngoku, khon' ukuze nive kwangelizwi eli lam ixhala endinalo; kaloku ndiyanoyikisela.
Umzekeliso ngoHagare noSara
21Mandikhe ndibuze kwabo bafuna ukuba phantsi *komthetho kaMosis: Aniyiva na into ethethwa ngumthetho? 22Umthetho uthi uAbraham wayenoonyana ababini; omnye wayengunyana wesicakazana esilikhoboka,ZiQalo 16:15 omnye engunyana womfazi wekhaya.ZiQalo 21:2 23Lo nyana wesicakazana yena wazalwa ngendlela azalwa ngayo wonke umntu, kodwa yena unyana womfazi wekhaya wazalwa ngenxa yesithembiso sikaThixo. 24Ngumfanekiso nje lo: aba bafazi babini bafuzisela iminqophiso emibini; omnye (uHagare ukutsho) uvela entabeni yeSinayi, obantwana bazalelwa ebukhobokeni. 25UHagare ufuzisela intaba yeSinayi kwelama-Arabhu, ekwafanekisa le dolophu yaseJerusalem ikhoyo ngoku, esebukhobokeni nabemi bayo bonke. 26Eyasezulwini yona iJerusalem ezayo ikhululekile, yaye ingumama wethu. 27Kuba *iziBhalo zithi:
“Vuya, wena ludlolwazana!
Memelela ngemincili, wena ungazange wayiva inimba!
Kuba umfazi owalahlwa yindoda woba nabantwana abaninzi kunalowo uhlala nendoda yakhe.”Isaya 54:1
28Nina ke ngoku, mawethu, ningabantwana bakaThixo ngenxa yesithembiso, kanye njengokuba noIsake wayengumntwana wesithembiso. 29Ngelo xesha unyana owazalwa ngendlela eqhelekileyo wamtshutshisa unyana owazalwa ngamandla oMoya kaThixo;ZiQalo 21:9kusenjalo ke nangoku. 30Kodwa ke zithini iziBhalo? Zithi: “Sikhuphele ngaphandle isicakazana esilikhoboka kunye nonyana waso; kaloku unyana wesicakazana makangalidli ilifa nonyana womfazi wekhaya.”ZiQalo 21:10 31Ke thina, mawethu, asingobantwana besicakazana esilikhoboka, singabomfazi wekhaya, oko kukuthi singabakhululekileyo.